Banyere Anyị - Fujian AoBoZi Technology Co., Ltd.
E guzobere na 2005 na Fujian, China, ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke ọkachamara na R & D, mmepụta, ọrịre na ọrụ nke dakọtara ihe eji ebi akwụkwọ. anyị bụ ndị kasị emeputa na ọkachamara ndú na ubi nke Epson, Canon, HP, Roland, Mimaki, Mutoh, Ricoh, Nwanna, na ndị ọzọ a ma ama ika pụrụ iche na iche iche nke.
➢ Inkjet Printer Ink dị ka sublimation ink, ink ink, ink dai, dtg ink, uv ink, eco ihe mgbaze ink, ihe mgbaze ink wdg;
➢ Dị iche iche nke Epson inkjet ngwa nbipute, dị ka A3 A4 size, 61cm na 111cm ebipụta size;
➢ Indelible Election Ink (ọlaọcha nitrate ntuli aka ink) na-agaghị ehichapụ welara nke eji maka nzuko omeiwu ma ọ bụ President ịtụ vootu na Africa na Asia mba na ezi mma na price bụ isi anyị lekwasịrị anya;
➢ Pen ink dị ka whiteboard pen ink, iyi pen ink, itinye pen ink set, mmanya mmanya nke na-eji maka ụdị nile nke pen mejupụta;
➢ TIJ2.5 Coding and Marking dị ka nzuzo na-ebi akwụkwọ, mmiri na ink ihe mgbaze, mmiri dabeere na ihe mgbaze ink ink nke jiri mkpụrụedemede barcode;
Ka emechara, anyị na-adịghị nanị ezite inks, ma ịzụlite ahaziri ngwọta na kpọmkwem dakọtara ma gị chọrọ na ndị nke gị ahịa na-enye keukwu ọrụ nke OEM na anyị ika maka anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na ahịa. Ọhụrụ anyị ike idu ke mmepe nke-ebi akwụkwọ ink maka obibi akwụkwọ ngwọta, nakwa dị ka akụrụngwa, teknụzụ na ngwa. Nke a pụtara na enwere ike itinye ngwaahịa ndị emepụtara ọhụụ na ahịa ozugbo.
Anyị na-anọ ọhụụ ma na-anabata ọbụlagodi mgbe mmepe ahụ. Usoro modula anyị pụrụ iche ma na-agbanwe agbanwe na-enye anyị ohere ịmezu uche gị niile. Anyị na-agbaso nke a site na ịkwado gị na saịtị iji bulie usoro gị ma kwenye na nnyefe a pụrụ ịdabere na ngwa ngwa site na netwọkụ arụmọrụ zuru oke.
Ndị ọrụ a raara onwe ha nye nke ukwuu nyere gị naanị gị ga-akwado gị na ọrụ ọ bụla nke ọrụ ahụ ma jide n'aka na a ga-aza ajụjụ gị ọsọ ọsọ ma tinye uche gị n'ọrụ. Obooc nwere ngwugwu zuru oke nke ịgwọta mmadụ iche iche ga-eme ihe dị iche na ịchọtakwu ụdị ụdị ọgwụgwọ ga-eweta uru yana ihe niile ga-eme ka ị nwee ọganiihu.
Ndị ọrụ anyị na-enyere gị aka na mkpa gị niile. Anyị anaghị ahụ onwe anyị dị ka onye na-emepụta ink dị mfe mana ndị mmekọ gị nwere ntụkwasị obi. Nke a gụnyere ịmepụta inks dị elu na ịhazi ha nnyefe ha na gị yana ịnye nkwado teknụzụ. Anyị na-enye ihe ngwọta akụ na ụba kachasị na usoro ọrụ gị niile.
1. Dị ka ISO9001 na ISO14001 gbaara emeputa, anyị ink kwụsie ike bụ ihe kasị mma na China, ghọtara site ahịa na asọmpi na China.
2. A na-etinye olu ahịa.
3. Gọọmentị nke Philippines na-ahọrọ anyị dịka otu n’ime ndị na-eweta ink.
4. Anyị nwere ike ịnakwere azụmahịa OEM ink.
5. Anyị bụ ndị a pụrụ ịdabere na ink soplaya maka Taiwan katrij emepụta.
Anyị ngwaahịa akara
1. Nnukwu ink
2. Mejupụta ink na kit kit
3. Ngwa CISS na CISS
4. cart Kwekọrọ n'Ozizi cartridges
5. A dum set nke thermal na-ebi akwụkwọ na ngwa ha
6. Pụrụ iche ink, dị ka ink anaghị emebi emebi
Anyị na-ele anya ịmepụta gị echi mara mma.